ရိုဟင်ဂျာဘက်က တစ်ဖက်သတ် မရပ်တည်ဟု ဒေါ်စုပြော
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခမှာ မိမိအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာဘက်ကနေ တစ်ဖက်သတ် ရပ်တည်ပြောဆိုပေးမှာ မဟုတ်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သုံးခွမြို့မှာ ပြည်သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်
Photo: RFA/Kyaw Htoon Naing
ပြဿနာရဲ့ အကြောင်းရင်းမှန်ကို မကြည့်ဘဲ ရိုဟင်ဂျာဘက်က တစ်ဖက်သတ် ရပ်တည်ပြောဆိုမှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ ဘယ်ဘက်ကိုမှလည်း တစ်ဖက်သတ် ဘက်လိုက်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ဘီဘီစီ သတင်းဌာနကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်အရေးမှာ နှစ်ဘက်လုံးက သည်းခံစိတ်မွေးကြဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အပြန်အလှန် သတ်ဖြတ်နေကြ၊ သူ့အိမ်၊ ကိုယ့်အိမ် အပြန်အလှန် မီးရှို့နေကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ပြဿနာပြေလည်နိုင်မှာလဲ၊ ပြဿနာရဲ့ တကယ့်အခြေခံ အရင်းအမြစ်တွေကို မရှုမြင် မသုံးသပ်ဘဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သြဇာ အရှိန်အဝါ သုံးစွဲပြီး ဘက်လိုက် မပြောဆိုသင့်ပါဘူး။
တခြားအခြေခံအကြောင်းရင်းတွေကို မကြည့်ခင်မှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ရှိအောင်၊ လူအားလုံး လုံခြုံမှုရှိအောင် ပထမလုပ်ရပါမယ်။ ဘယ်ဘက်ကမှ မရပ်လို့ မိမိအပေါ်မကျေနပ်ကြဘူးဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိမိအနေနဲ့ ဘက်လိုက်ပြီး မပြောနိုင်ပါဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
Daw Su, you know the history, just say to the world that illegal Bangalis should go back to where they belongs.
Rohinga, aka Bengali, as well as some Chinese in central Burma were illegally migrated during the military government's long rule. While the Chinese had paid the government forastatus, the Bengali have exodus-ed themselves and the population expoloded up to some 800,000 and are demandingastatehood in future Burma. Also, the local Arakanese do no get along with them and occasionally oppress them. RULE OF LAW and IMMIGRATION REFORM IS NEEDED before there isalong term deal. Thanks!
Nov 11, 2012 02:22 PM
Nov 11, 2012 09:36 AM
ရိုဟင်ဂျာတွေ ခိုးဝင်နေတာကို တတ်နိုင်သမျှတိုက်ထုတ်ပေးပါလို. အမေစုကို တောင်းဆိုချင်ပါတယ်
Nov 10, 2012 10:55 PM
Nov 05, 2012 07:38 PM